Google Stadia n'efu maka ọnwa 2 maka ekwentị mkpanaaka gị na PC | Gam akporosis
Google ewerela akwụkwọ ozi ya mara ọkwa na ị nwere ọnwa abụọ Google Stadia n'efu na-enwe ya site na mkpanaka gị. Ohere buru ibu iji nwee ọ Googleụ na ọrụ gụgharia nke Google na eziokwu na-aga nke ọma.
Ọ bụrụhaala na ị nwere otu ezigbo eriri optic njikọ, ebe ọ bụ na ọ na-adọta ihe nbudata iji nye gị ahụmịhe egwuregwu ịgba egwu. Anyị anwalela ya na LG Gram na mkpanaka anyị, nke eziokwu bụ na ọ na-akụ.
Na mbụ na-ekwu na Google Stadia ọ dịnyeere anyị ọnwa ole na ole na ọ bụ ọrụ na-enye ndenye aha Pro iji nwee ike kporie egwuregwu dị elu na-akwụghị ụgwọ. Anyị nwere ike ịnweta akara aka 2 na GRID, dị ka ndị ọzọ, nwere onwe kpamkpam na ọnwa abụọ a n'efu.
Mgbe ahụ anyị ga-akwụ ihe karịrị 9 euro kwa ọnwa iji nwee ọ enjoyụ na ọrụ a, ọ bụ ezie na ịzụta egwuregwu dị ka nnukwu Red Dead Remeption 2 si Rockstar Games ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ kacha mma kacha mma na PC na-enweghị ọtụtụ eserese.
Dị ka ee, ị ga-enwe obi ụtọ ọ bụrụ na ị nwere njedebe dị elu dị ka Pixel, Samsung na ụfọdụ ndị ọzọ. Nnukwu ọrụ anyị na-enwetabeghị mana nke ahụ ahapụla anyị nnukwu uto n'ọnụ anyị. Na LG Gram, nke bụ ezigbo laptọọpụ, ọ bụ ezie na enweghị ezigbo eserese, GRID jupụtara na eserese iji nwee ọmarịcha ịma mma, yabụ ọ bụrụ na ị tụleghị ịgbanwe PC ma ọ bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe, a na-atụ aro Google Stadia nke ukwuu.
N'ezie, ọ ka enweghị egwuregwu, ọ bụ ezie nwere ụfọdụ umi dị ka ikpeazụ Mbibi. Iji nwee ike ịnụ ụtọ ọnwa abụọ nke Google Stadia, kwụsị ebe a: ikpe ọnwa 2 n'efu Google Stadia.
Naanị debanye aha na weebụ, budata ngwa Google Stadia na ekwentị gị ma gbalịa igwu egwu n'efu na ya. Ma ọ bụghị na ị nwere ike gbaa si na PC gị, ọ bụ ezie na m kwuru, ị chọrọ ezigbo njikọ maka nkwanye ga-ezu oke. Ọ bụrụ otu a, dịrị njikere maka nnukwu ahụmịhe egwuregwu na-enweghị nkọwa zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Gbalịa Google Stadia n'efu maka ọnwa abụọ ugbu a, osote!